Sida Loo Helo Caawinaad Naftaada | Caafimaadka Maskaxda Texas
Helitaanka Caawinaad Xirfad leh
Waxaad kala hadli kartaa takhtarkaaga ama daryeel bixiyahaaga koowaad caafimaadkaaga maskaxda. Weydiinta iyaga wax su’aalo ah oo aad qabto waa bar bilow wanaagsan ee raadinta daryeel xirfadeed ee ku saabsan welwelka caafimaadka maskaxda. Dhakhtarkaaga ayaa wadaagi kara macluumaadka guud, sameeya baaritaanka hore, wuxuuna ku siin karaa tixraacyo ku takhasusay caafimaadka maskaxda.
Raadi Bixiye Adigaa iska leh
Waxaad adeegsan kartaa helitaankeenna Adeeg Bixiye.
Ka hel Maamulka Caafimaadka Maskaxda ee Deegaanka ama Maamulka Caafimaadka Dabeecadda ee deegaankaaga adoo maraya Websaytka Caafimaadka Texas iyo Adeegyada Aadanaha, ka dib u gaara helitaanka adeegyada.
Adeegyada Caafimaadka iyo Adeegyada Aadanaha ee Texas waxay ka shaqeeyaan 10 gobol isbitaalada dadka qaba arrimaha caafimaadka maskaxda. Isbitaaladaan waxay ku yaaliin gobolka oo dhan.
Raadi deegaankaaga Halkan Gudbinta Qiimaynta Baadhitaanka Hubinta Isticmaalka Maandooriyaha.
Haddii aad caymis leedahay, isku day inaad wacdo lambarka adeegga macaamiisha oo had iyo goor ku yaal dhabarka kaarka. Badanaa, waxay ku siin karaan fursado badan oo kuu dhow oo ku saleysan nambarkaaga zip.
Waa muhiim inaad xasuusato in bixiyeyaasha qaarkood ay lahaan karaan liisas sugitaan. Haddii aad la kulanto tan markaad raadineyso adeeg bixiye, waad ka adeegan kartaa adeeg bixiyeyaasha kale, u adeegso is-daryeelid inta aad sugeyso taariikhaha ballanta, iyo tan ugu muhiimsan, ha ka quusan raadintaada caawimaad.
Kheyraadka Federaalka iyo Gobolka iyo Ururo Xirfadlayaal ah
Waxa kale oo jira ilo dawladeed iyo heer federaal oo loogu talagalay inay kaa caawiyaan inaad hesho daryeel caafimaad iyo adeegyo qiime jaban. Qaar ka mid ah kheyraadka gobolka waxaa ka mid ah:
Adeegyada Caafimaadka iyo Aadanaha ee Texas (HHS)
HHS waxay siisaa caafimaadka maskaxda iyo adeegsiga maandooriyaha qoysaska iyo dadka da ‘kasta leh.
Ku Xadgudubka Maandooriyaha iyo Maamulka Adeegyada Caafimaadka Maskaxda (SAMHSA)
Macluumaad guud oo ku saabsan caafimaadka maskaxda iyo helitaanka adeegyada daaweynta ee deegaankaaga, ka wac Khadka Caawinta Gudbinta Daaweynta ee SAMHSA 1-800-662-CAAWIMA (4357). SAMHSA sidoo kale waxay leedahay a Tilmaanta Daaweynta Caafimaadka Habdhaqanka boggeeda internetka oo laga raadin karo goobtiisa.
Isbahaysiga Qaranka ee Cudurka Maskaxda (NAMI)
NAMI waxay siisaa u doodid, waxbarasho, taageero iyo wacyigelinta bulshada ee shakhsiyaadka iyo kuwa ay jecel yihiin ee ay saameeyeen cudurka dhimirka.
Caafimaadka Maskaxda Ameerika (MHA)
MHA waa hay’ad samafal ku saleysan bulshada oo loogu talagalay wax ka qabashada baahiyaha kuwa la nool xanuunka dhimirka iyo kor u qaadida caafimaadka guud ee maskaxda dhammaan dadka Mareykanka.
Haddii aad hadda la kulantid dhibaato, fadlan isla markiiba raadso caawimaad! Waxaad wici kartaa ama farriin ugu diri kartaa khadka 24hr ee dhibaatada 1-800-273-HADAL (8255) ama isticmaal mid ka mid ah adeegyadan dhibaatooyinka kale:
Garaac 2-1-1 , xulashada 8
Raadi LMHA deegaankaaga oo wac khadka dhibkooda.
Haddii aad halyeey tahay, taabo 1.
Khadadka noloshu waa khadka tooska ah ee dhibaatada, qarsoodiga ah waana la heli karaa qof walba 24/7. Lifeline-ka wuxuu ku xiraa dadka soo wacaya xarunta dhibaatada ugu dhow ee shabakadda qaranka ee Lifeline. Xarumahani waxay bixiyaan la-talin dhibaatooyinka iyo u gudbinta caafimaadka maskaxda. Dadka dhagaha la ‘, ama maqalka culus, ama maqal la’aanta waxay kala xiriiri karaan khadka tooska ah ee TTY at 1-800-799-4889.
Qoraal “HELLO” ugu dir 741741
Wac 1-800-273-HADAL (8255) oo taabo 1
ama qoraal u diro 838255
Khadka Dhibaatada Halyeeyadu waa kheyraad bilaash ah, qarsoodi ah oo isku xira halyeeyada 24 saacadood maalintii, toddobada maalmood ee usbuucii iyada oo jawaab-bixiye tababaran. Adeeggu waa u diyaar dhammaan halyeeyada, xitaa haddii aysan ka diiwaangashanayn VA ama ka diiwaangashan daryeelka caafimaadka VA. Dadka dhagaha la ‘, maqalka culus, ama maqal la’aanta wici karaan 1-800-799-4889.
U qor “BILOW” 678780 ama ku sheekayso khadka tooska ah.
Go’aansiga haddii Bixiyaha Daaweynta ama Caafimaadka Maskaxda
Xirfadlahu Adiga Ayuu Adiga Ugu Tahay.
Daaweyntu waxay si fiican u shaqeysaa markaad xiriir wanaagsan la leedahay bixiyahaaga caafimaadka maskaxda. Si kastaba ha noqotee, isku dayga inaad ogaato haddii qof kugu habboon yahay adiga ka hor ballanta ugu horreysa waxay noqon kartaa mid khiyaano leh. Way ku caawinaysaa inaad haysato liis su’aalo ah oo diyaar u ah bixiyeyaasha caafimaadka maskaxda si ay kuu siiyaan fikrad ah inay kugu habboon yihiin iyo in kale. Inaad yeelato su’aalo sidoo kale waxay ku siin kartaa macluumaad ku saabsan lacag bixinta, iwm. Su’aalaha waxtar leh qaarkood waxaa ka mid ah:
Miyaad khibrad u leedahay inaad qof ku daaweyso arrimahayga? Hadday haa tahay, waa maxay / intee in le’eg khibrad?
Maxay tahay qaabka aad ula dhaqmayso qof arrimaha la xiriira?
Muddo intee le’eg ayuu daaweyntan noocan ahi caadi ahaan socotaa?
Waa maxay caymiska aad aqbasho?
Miyaad bixisaa miisaanka mushaharka ee hoos u dhacaya?
Waa maxay khidmadahaagu?
Machadka Qaranka ee Caafimaadka Maskaxda (NIMH) wuxuu hayaa warqad xaqiiqo ah oo bilaash ah oo waliba kaa caawin kara: La-Xakamaynta Caafimaadka Maskaxdaada: Talooyin Ku Saabsan inaad La Hadasho Bixiyaha Daryeelka Caafimaadkaaga
Kuweena Bogga Caafimaadka Fayo-qabka Maskaxda iyo kheyraadka ku siiso macluumaad weyn iyo xiriiriyeyaal ilaha bilaashka ah si aad u daalacato.
Macluumaadka iyo macluumaadka MHA ee ku saabsan sida wanaagsan ee aad naftaada u daryeesho.